Plex के हो र कसरी यो स्मार्ट टिभी मा काम गर्दछ | मोबाइल फोरम
Plex के हो र कसरी यो स्मार्ट टिभी मा काम गर्दछ
डेनियल टेरासा | 25/09/2021 12:00 | कार्यक्रमहरू
यदि तपाईंले सुन्नुभएको छ भने Plex र सबै कुरा यो यसको प्रयोगकर्ताहरु लाई प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ, यो पक्का तपाइँको रुचि piqued छ। यस पोष्ट मा हामी Plex के हो र व्याख्या गर्न जाँदैछौं यो कसरी काम गर्दछ। विस्तार मा र केहि रोचक समाधान संग यो भन्दा बाहिर प्राप्त गर्न को लागी।
Plex एक पूर्ण छ वास्तविक समय मल्टीमीडिया स्ट्रिमि service सेवा। यो गर्न को लागी धन्यवाद, हामी अन्य उपकरणहरु बाट सामग्री हेर्न को लागी, उनीहरुलाई हाम्रो मा भण्डारण गर्न को लागी बिना सक्षम हुनेछ। यस तरिका मा, उदाहरण को लागी, संगीत, फोटोहरु र कम्प्यूटर मा होस्ट गरीएको कुनै अन्य सामग्री को लागी फिल्महरु र श्रृंखला एक स्मार्टफोन मा खेल्न सकिन्छ।
Plex परियोजना 2010 मा एक निजी पहल मा यसको मूल छ। मूल विचार अमेरिकी स्टार्टअप बाट आएको हो Plex, Inc। यो कम्पनी Plex मीडिया सर्भर र अनुप्रयोग को विकास को लागी जिम्मेवार छ। यो सबै सफ्टवेयर "Plex" ट्रेडमार्क अन्तर्गत दर्ता गरीएको छ।
1 Plex के हो?
2 Plex डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्
3 अन्य उपकरणहरु (स्मार्ट टिभी) मा Plex प्रयोग गर्नुहोस्
3.1 कसरी एक स्मार्ट टिभी संग Plex जडान गर्न
3.2 जडान समस्या र समाधान
3.3 सामग्री साझा गर्नुहोस्
4 के हुन्छ यदि मेरो घरमा स्मार्ट टिभी छैन?
Plex के हो?
Plex एक अनुप्रयोग हो कि हामीलाई अनुमति दिन्छ एक महान मल्टिमिडिया केन्द्र मा हाम्रो कम्प्यूटर बदल्नुहोस्। यसको मुख्य प्रकार्य सबै मल्टिमिडिया फाइलहरु लाई पहिचान गर्न को लागी हो कि हामीले हाम्रा फोल्डरहरुमा राखेका छौं उनीहरुलाई पछि र यस तरीकाले व्यवस्थित गर्न को लागी हाम्रो आफ्नै जस्तै केहि सिर्जना गर्नुहोस् Netflix.
ठिक छ, सायद त्यो नक्कल वा Netflix संग प्रतिस्पर्धा गर्न को लागी हो, केहि हद सम्म अतिरंजित कथन, यद्यपि विचार उस्तै छ। जबकि Netflix संग यो प्लेटफर्म नै हो कि सामग्री लाई सक्षम बनाउँछ कि हामी यसको सर्वर मा पहुँच गर्न सक्दछौं, Plex को उपयोग गरेर हामी जो हाम्रो मनपर्ने को लागी मल्टीमीडिया सामग्री जोड्दछौं। र यो एक महान लाभ हुन सक्छ। यो कम्प्यूटर मा फोल्डर बाट गरीएको छ कि हामी पहिले को रूप मा चयन गरीएको छ "रूट फोल्डर"। भण्डारण सीमा? एक कि हामीलाई हाम्रो हार्ड डिस्क को क्षमता अनुमति दिन्छ।
Plex को बारे मा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि लगभग सबै लोकप्रिय अडियो र भिडियो ढाँचा संग उपयुक्त। कुनै कम महत्त्वपूर्ण सम्भावना यो हो कि यसले हामीलाई विषयवस्तुहरु द्वारा वा सामग्री को प्रकार द्वारा, हाम्रो मनपर्ने को लागी हाम्रो पोर्टफोलियो संगठित गर्न को लागी प्रदान गर्दछ। यो पनि अन्य अनलाइन च्यानलहरु संग टाढा जडान गर्न सक्षम हुन को लागी रोचक छ।
अधिक शान्त Plex सुविधाहरु: एक पटक सफ्टवेयर सेटअप छ, तपाइँ यसलाई कुनै पनि उपकरण बाट पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले गर्नु पर्छ सबै को आवेदन स्थापित छ Plex Media सर्भर कम्प्यूटर मा जहाँ मल्टीमीडिया फाइलहरु होस्ट गरीएको छ र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो सक्रिय छ जब प्लेटफर्म को उपयोग गरीरहेको छ।
यो गर्न को लागी अर्को तरीका को उपयोग गरेर हो Plex ग्राहक, जो सबै प्लेटफार्महरु को लागी विशिष्ट संस्करणहरु छन्: एन्ड्रोइड, आईओएस, जीएनयू / लिनक्स, macOS, विन्डोज, SmartTV, Chromecast र कन्सोल पनि प्लेस्टेशन र Xbox। यस प्रकार, हामी ती मध्ये कुनै मा हाम्रो भिडियो देख्न सक्छौं।
Plex डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्
Plex को उपयोग गर्न को लागी पहिलो कदम एप डाउनलोड गर्न को लागी हो Plex Media सर्भर बाट आधिकारिक वेबसाइट। तपाइँ मात्र यो पहुँच र बटन मा क्लिक गर्नुहोस् «डाउनलोड गर्नुहोस्»। यस पछि, एक मेनु प्रदर्शित हुनेछ जसमा तपाइँ प्रत्येक अपरेटि system सिस्टम को लागी उपयुक्त संस्करण को चयन गर्न को लागी छ। हामीले मात्र हाम्रो छनौट गर्नु पर्छ।
डाउनलोड पछि, बस स्थापना प्रक्रिया शुरू गर्नु अघि, हामी गर्न को लागी संभावना छ छनौट गर्नुहोस् कुन फोल्डरमा हामी अनुप्रयोग स्थापना गर्न चाहन्छौं स्वागत पृष्ठ मा। यसको लागी तपाइँ बटन मा क्लिक गर्नु पर्छ "विकल्पहरू" र हाम्रो कम्प्यूटर मा गन्तव्य फोल्डर चयन गर्नुहोस्। एक पटक यो गरिसकेपछि, हामी बटनमा क्लिक गर्न सक्छौं "स्थापना गर्नुहोस्" र प्रक्रिया स्वचालित रूपमा चल्नेछ।
जब यो प्रक्रिया समाप्त भयो, मात्र बटन मा क्लिक गर्नुहोस् "फ्याक्नु" आवेदन सुरु गर्न। अर्को, एक पृष्ठ ब्राउजर मा खुल्नेछ जसमा हामी एक प्रयोगकर्ता नाम, एक सम्बन्धित ईमेल ठेगाना र एक पासवर्ड प्रविष्ट गरेर दर्ता गर्नुपर्छ।
मा नियन्त्रण प्यानल मुख्य हामी ट्याबमा पहिले जान्छौं "नाम", जसबाट हामी एउटा मेनुमा पहुँच गर्दछौं जसमा हामी हाम्रो Plex सर्वर को नाम लेख्नेछौं। यस पछि हामी बटन थिच्नेछौं "अर्को" "मिडिया लाइब्रेरी" मा जानुहोस्। पूर्वनिर्धारित मात्र दुई देखा पर्छन्: फोटो र संगीत, यद्यपि हामी धेरै को रूप मा हामी सजीलै संग विकल्प को रूप मा बनाउन सक्छौं "पुस्तकालय जोड्नुहोस्"। पुस्तकालय मोड मा दृश्य कोटिहरु (विधा, शीर्षक, वर्ष, आदि) को माध्यम बाट सामग्री ब्राउज गर्न को लागी धेरै उपयोगी छ, जुन हामी हाम्रो आफ्नै प्राथमिकताहरु अनुसार बनाउन सक्छौं।
यस पछि हामी हाम्रो सामग्री को प्रबंधन शुरू गर्न सक्छौं, र सबै भन्दा माथि, यो रमाईलो। दुबै कम्प्युटर मा र अन्य उपकरणहरु बाट, जस्तै हामी तल व्याख्या:
अन्य उपकरणहरु (स्मार्ट टिभी) मा Plex प्रयोग गर्नुहोस्
यो ठीक यो सुविधा हो कि Plex यस्तो एक रोचक संसाधन बनाउँछ। यो ट्याब्लेट, मोबाइल र अन्य उपकरणहरुमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो तरीका उनीहरु मध्ये प्रत्येक एक मा गर्न को लागी समान छ, प्रत्येक एक को मतभेद संग। यो मूल रूप मा Plex अनुप्रयोग डाउनलोड र हाम्रो सर्वर संग जोडिएको हुन्छ।
कसरी एक स्मार्ट टिभी संग Plex जडान गर्न
प्रक्रिया व्यावहारिक रूप मा उही जस्तै ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन जस्ता अन्य उपकरणहरु लाई लिंक गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। त्यहाँ मात्र केहि फरक छन्। प्रदर्शन गर्न Plex र एक स्मार्ट टिभी को बीच सम्बन्ध तपाइँ यी दुई सरल चरणहरु कार्यान्वयन गर्न को लागी छ:
सुरू गर्नका लागि तपाईसँग हुनु पर्छ हाम्रो स्मार्ट टिभी पहुँच गर्नुहोस्, एप स्टोर मा जानुहोस् र Plex अनुप्रयोग पाउन। तपाइँलाई मात्र यो डाउनलोड गर्न को लागी छ, जो स्वचालित रूप बाट पुस्तकालय मा भण्डार गरिनेछ।
त्यसोभए तपाईले गर्नु पर्छ पुस्तकालय खोल्नुहोस् (यो भन्दा पहिले तपाइँ यो सेवा को खाता संग लग इन गर्न को लागी, उस्तै छ कि हामी सर्वर बनाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ) र हाम्रो प्रमाण पत्र प्रविष्ट गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड.
यो सबै त्यहाँ छ। यस पछि हामी Plex भित्र हुनेछौं र हामी यो हाम्रो स्मार्ट टिभी बाट तपाइँ प्रदान गर्दछ कि सबै सामग्री हेर्न को लागी सक्षम हुनेछौं। हाम्रो आफ्नै सामग्री को उपयोग गर्न को लागी कि हामी हाम्रो सर्वर मा राख्छौं, तपाइँ को विकल्प मा जानु पर्छ «+ अधिक.
जडान समस्या र समाधान
भिडियो को असफल स्वतः पत्ता लगाउने फिक्स
यद्यपि प्रक्रिया धेरै सरल छ, यो कहिले काहिँ केहि समस्याहरु लाई प्रस्तुत गर्न सक्छ। सबैभन्दा सामान्य को एक हुन्छ जब हुन्छ Plex हाम्रो सामग्री पत्ता लगाउँदैन। यो एक बिट कष्टप्रद हुन सक्छ, तर यो फिक्स गर्न को लागी एक सजिलो मुद्दा हो।
यो गर्न को लागी, हामी पहिले वेब सेवा मा जानेछौं र फोल्डर मा प्रवेश गर्दछौं जहाँ हामी देख्न सक्दैनौं सामग्री अवस्थित छ। हामी प्रश्न मा फोल्डर मा छ कि तीन बिन्दुहरु को प्रतिमा मा क्लिक गर्नुहोस्। विकल्पहरु को एक श्रृंखला तल प्रदर्शित गरिनेछ, ती रुचिहरु छन् कि हामीलाई रुचि सहित: "पुस्तकालय मा फाइलहरु खोज्नुहोस्"। केवल यो संग हामी Plex स्थानीय फोल्डर को एक विश्लेषण चलाउन को लागी बाध्य हुनेछ, यसको सबै अपडेट गरिएको सामग्री देखाउँदै।
अर्को धेरै सामान्य समस्या हो भिडियो को स्वतः पत्ता लगाउन असफल। साथै यस मामला मा यो समाधान गर्ने तरिका सरल छ:
मा वेब संस्करण, तपाइँ मा प्रवेश गर्नु पर्छ कार्पेट जहाँ भिडियो होस्ट गरिएको छ र मा क्लिक गर्नुहोस् पेन्सिल आइकन त्यो देखिन्छ जब हामी माउस माउस कर्सर होवर। त्यहाँ बाट हामी प्रश्न मा भिडियो को सम्बन्ध मा सबै जानकारी सम्पादन गर्न सक्छौं।
हामीलाई चासो लाग्ने एक त्यो हो "पोस्टर", जसमा पहिचान छवि देखिन्छ। बस यो आवरण परिवर्तन गर्न को लागी उपलब्ध को रूप मा देखाउन को लागी तान्नुहोस्।
सामग्री साझा गर्नुहोस्
त्यहाँ विकल्प छ सामग्री साझा गर्नुहोस् हाम्रा साथीहरु संग हाम्रो मल्टीमीडिया सर्भर को। यस तरीकाले, उनीहरु पनि उनीहरुको आफ्नै स्मार्ट टिभी बाट हाम्रा भिडियोहरु हेर्न सक्छन्। यो गर्न को लागी, हामी वेब संस्करण को उपयोग र यी चरणहरु को पालन गर्न को लागी हुनेछ:
पहिले हामी मा क्लिक गर्नेछौं तीन पोइन्ट आइकन र हामी विकल्प चयन गर्नेछौं "साझा".
त्यसोभए तपाइँ सबैले सोध्नु हुन्छ ईमेल Plex वा हाम्रो साथीहरु को लागी प्रयोगकर्ता नाम मा प्रयोग गरीयो, यो विकल्प मा उनीहरुलाई प्रविष्ट गर्न को लागी।
एक पटक यो गरीन्छ, एक विन्डो सबै फोल्डरहरु संग प्रदर्शित गरीन्छ। तपाइँ साझा गर्न चाहानुहुन्छ छनौट गर्नुहोस्।
यस प्रकार, प्रतीक्षा को केहि मिनेट पछि (यो मात्रा र सामग्री को प्रकार मा निर्भर गर्दछ), हाम्रो सम्पर्कहरु लाई स्वचालित रूप बाट हाम्रो सर्वर र पहिले छनौट गरिएको सामग्री को लागी पहुँच हुनेछ।
के हुन्छ यदि मेरो घरमा स्मार्ट टिभी छैन?
सबै को घरमा एक स्मार्ट टिभी छैन, तर त्यो अन्य उपकरणहरु र मिडिया मा Plex सामग्री को आनन्द उठाउन को लागी एक बाधा हुन छैन। दिन को अन्त मा हामी एक multiplatform सेवा को बारे मा कुरा गरीरहेका छौं। र त्यो हाम्रो अगाडि धेरै र विविध संभावनाहरु राख्दछ।
त्यसोभए यदि तपाइँको विचार हो तपाइँको घर टिभी मा Plex छ, तर तपाइँसँग एक स्मार्ट टिभी छैन, यी अरु हुन् विकल्पहरू:
अमेजन फायर टिभी।
Google TV को साथमा Chromecast।
Xiaomi Mi स्टिक।
सारांश मा, हामी Plex को लागी सही उपकरण को रूप मा परिभाषित गर्न सक्छौं घरमा हाम्रो आफ्नै Netflix छ। एक तरीका हाम्रो सबै अडियो भिजुअल सामग्री बिल्कुल संगठित र वर्गीकृत गरीएको छ यो आराम संग हाम्रो बैठक कोठा मा रमाउन को लागी सक्षम हुन को लागी। हाम्रो आफ्नै स्मार्ट टिभी को माध्यम बाट वा aforementioned विकल्प को कुनै पनी संग।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » कार्यक्रमहरू » Plex के हो र कसरी यो स्मार्ट टिभी मा काम गर्दछ
कसरी Minecraft मा पुस्तकालयहरु शिल्प गर्ने
कसरी सजीलै ट्विच प्राइम लाई GTA लाई लिंक गर्ने